Izithambisi zokwelapha ezihamba phambili ezingekho-ezinobuthi ezihamba phambili ifektri ye-tube injector ifektri nabakhiqizi | I-Aimsea
ICalcium Zinc (CaZn) engeyona enobuthi i-PVC Stabilizers esetshenziswe emakhulwini emikhiqizo nakumadivayisi enezinhlelo zokusebenza eziningi ezenziwa njalo. Kwenziwe nge-PVC kungakhiwa ngokubonakala okuhle kakhulu ukuvumela ukuqapha okuqhubekayo kokugeleza koketshezi. I-PVC ayigcini ngokunikela ngokuguquguquka kwesicelo kepha futhi namandla, amazinga ezempilo, ukuqina ngisho nangaphansi kwamazinga okushisa nezimo. Ngakolunye uhlangothi, ama-PVC stabilizers adlala indima enkulu ekuqukethe izindleko zokunakekelwa kwezempilo ezikhuphukayo.
Isiqinisi esingeyona enobuthi, azikho izinsimbi ezisindayo eziyingozi, buyisela isiqinisi sendabuko, ukuphepha nokukhucululwa kwendle, okulungele ukuvikelwa kwemvelo
Umbala wokuqala omuhle kakhulu nokuzinza okuhle kwesikhathi eside;
Kokubili ukuqina nokukhuthaza ukuncibilika, ukufakela uketshezi kwepulasitiki kuhle, akunapuleti;
Inokusimama okuhle kakhulu kokushisa nokuthambisa, inomphumela wokuqina wokukhanya, ukumelana kahle kwesimo sezulu, inganciphisa ngokufanele umthamo we-titanium dioxide; ukumelana nokungcola kwe-sulfide, kungathuthukisa ukusebenza kwangaphandle kwemikhiqizo;
Ukusabalalisa, ukulwa nokukhubazeka okuhle, ukuthuthukisa umbala nokuqina komkhiqizo, futhi uthuthukise ukubonakala komkhiqizo;
Inomsebenzi wokuhlanganisa oyingqayizivele, onikeza ukusabalalisa okuhle kokugcwalisa, kuthuthukisa ukugoqwa nge-resin, kuthuthukise ukusebenza komkhiqizo, kunciphise ukugqokwa kwemishini futhi kwandise isikhathi sokusebenza kwensiza;
Ingakhulisa amandla ancibilikile, ikhuthaze amagwebu, futhi yenze amaseli afane futhi alungile. Ubuso bomkhiqizo busicaba, umbala uzinzile, ukuphambuka kombala kuncane, futhi izindleko zokukhiqiza zingancishiswa.
Ifanele imikhiqizo ethambile ye-PVC yemvelo, njengeshidi le-calendering, isikhumba sokufakelwa kanye njalonjalo, Ngokuhlolwa kwe-SGS, ihlangabezana ne-RoHS, EN71, EN1122, EPA 3050B, FDA 21CFR .172 888 uchungechunge olujwayelekile.
Okuqukethwe komlotha ophansi
Ukuzinza okuhle kokushisa
Ayinaphunga, Ayikho i-phenol
Non-Toxic, ayinaphunga & imvelo
Ayikho i-atomization futhi ayikho ipuleti ngaphandle
Okuqukethwe okuphansi kwezinto ezifakwe kalula kalula
Ifanele imikhiqizo eqinile ye-PVC ekhihliza imvelo, njenge-wallboard neshidi namawindi anezimpumputhe .Ukuhlolwa kwe-SGS, kuhlangana neRoHS, EN71 ， EN1122, EPA 3050B, FDA 21CFR .172 888 standard standard in world.
I-Impact Modifier I-Foamin g ejenti ACR Isilawuli esinamagwebu
I-calcium carbonat e
AmaLubrican ts umbala
isilinganiso 100 4-6
0.5-1.5 0.5-2 6-12 20-80 1-2 efanelekayo
A-> Idatha yenqubo yokuxuba:
Ithempelesha yokushisa: 100-110 temperature Izinga lokushisa elibandayo: 40-50 ℃
B-> Inqubo yokukhipha:
Intulo isilinda1 indawo Intulo isilinda2 indawo Intulo isilinda3 indawo Intulo isilinda4 indawo Umnyombo wokuhlangana Ikhanda Isikhunta Isikhunta somlomo
I-PVC isetshenziswa kakhulu ezinhlelweni zokwelashwa namuhla ngoba ayinakutholwa ngamagciwane, ihlanzwa kalula futhi inikezela ngezicelo zokusebenzisa okukodwa ezinciphisa ukutheleleka ekunakekelweni kwezempilo.
I-PVC isetshenziswe endaweni yezokwelapha iminyaka engaphezu kwengu-50. Kwaqale kwenziwa ukwenza i-tubing nezitsha eziguquguqukayo ukufaka esikhundleni senjoloba nengilazi ezazisetshenziselwe ukusetshenziswa ekunakekelweni kwezempilo. I-PVC nayo ingahlanganiswa ndawonye nokushiswa kwemvamisa ephezulu ngakho-ke kuvumela izinhlobo ezahlukahlukene zobunjwa besitsha nezinhlobo eziningi zokunamathiselwe. I-PVC etholakalayo kwezentengiselwano inamagatsha amakhulu futhi ine-crystallinity ephansi. Iziqukathi ezenziwe ngalolu hlobo lwe-PVC zinamandla angcono, izici eziphakeme namandla angaphezulu angaphezulu.
I-PVC futhi inikela ngokuguquguquka okudingekayo kwezicelo ezinjengezikhwama zegazi nezitsha ze-IV, kepha kungabuye kuthenjelwe kukho ngamandla nokuqina kwayo, noma ngabe ngaphansi kwamazinga okushisa nezimo ezishintshayo. I-PVC nayo ingakhishwa kalula ukwenza i-IV tubing, ifakwe i-thermoformed ukwenza ukupakisha kwe-'blister 'noma ukubumba kwe-blow ukwenza iziqukathi eziqinile eziyize. Lokhu kusetshenziselwa izinto ezihlukahlukene kuyisizathu esikhulu esenza i-PVC ibe yinto ekhethwa ngumkhiqizo wezokwelapha nabaqambi bokupakisha.
Langaphambilini I-Polyvinyl Chloride Stabilizer yezicathulo & okushelelayo kuphela i-PVC foam impahla eluhlaza
Olandelayo: Iziqinisi ze-PVC ezinhle zokuvikela izibuko zokuphepha zedivayisi yokusika utshani
I-PVC Heat Stabilizers Ebangeni Lokwelapha
I-PVC One Pack Stabilizer, PVC Izithasiselo, I-PVC Heat Stabilizer, Isisimamisi se-PVC, I-PVC Isinqinisi Esingenabuthi, I-PVC Heat Stabilizer Ye-Flexbile,